चिन्तन चौतारी: नेकपा विवादमा स्ट्याटसहरु
नेकपा विवादमा स्ट्याटसहरु
मेरी आमाको आँखाबाट आँसु कहिल्यै नझरोस्, झरे पनि खुशीले झरोस् ।
आमा धर्ती हुन्, प्रकृति हुन्, सृष्टि हुन् ।
सबथोक हुन् आमा ।
रामायण र महाभारत इतिहास हुन् कि रचित ग्रन्थ मात्रै हुन् भन्ने यकिन छैन तर प्रधानमन्त्रीले त राम नै यहीँको ठोकुवा गर्दिनुभएछ । तथ्यले पुष्टि नै गर्न सके त झन् गजब हुन्थ्यो ।
अयोध्या र हस्तिनापुर नेपाली भूमिमै पर्छन् भन्ने ऐतिहासिक पुरातात्त्विक प्रमाण जुटाएर दाबी गरौंला, हाम्रै बनाउला पनि तर अहिले चाहिँ अतिक्रमित भूमिलाई आफ्नो बनाउने कुटनैतिक पहल गर्ने बेला हो ।
बादीपहिरो र डुबानमा परेर मृत्यु भएका, घाइते र घरबारविहीन भएकाको चिन्ता र व्यवस्थापन गर्ने बेला हो ।
अब र अर्को बर्षको प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण, नियन्त्रण गरेर जनधन कसरी बचाउन सकिन्छ, रोकथाम र दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठोस योजना बनाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्ने बेला हो ।
ईन्डियाबिरुद्ध बोलेकै भरमा जनसमर्थन पाईने, महान राष्ट्रवादी भइने सोचबाट ग्रसित भएर जे पनि बोल्दिने शैलीले वर्तमानको सिमा सम्बन्धिका बिषय नै ओझेलमा पर्न सक्छ । राष्ट्रिय सरोकार राख्ने गम्भीर सवालहरुमा तथ्य नजुटाई उट्पट्याङ भाषण र उत्तेजना फैलाउने खालका भाषाले कुनै समस्या हल गर्न सक्दैन । राष्ट्रको उच्च ओहदामा बस्ने ब्यक्तिले त अप्ठ्यारो समयमा पनि सहि निर्णय लिन सक्नुपर्छ । अहिले त झनै कठिन परिस्थितिमा जिम्मेवारीपूर्वक कुशल नेतृत्व प्रदान गर्न सम्बन्धित विज्ञहरुसँग अलि बदी छलफल र चिन्तन गर्नुपर्छ ।
हरेक कुरामा आफैं सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी सर्वेसर्वा र अन्तिम सत्य भएको भ्रम पाल्ने प्रमप्रति गर्व गरौं कि हीनताबोध? जनताको मनमा यस्तो प्रश्न आउन नदिन प्रम र उनका सल्लाहकारले विशेष सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । प्रमबाट पटकपटक उस्तै हर्कत दोहोरिरहनु दुःखद् छ ।
कुनै व्यक्तिले आफैलाई प्रधान ठानेर पार्टी र संगठनलाई मनोमानी दंगले संचालन गर्दा, अरुको भूमिकालाई महत्त्व नदिदा, अवमूल्यन गर्दा कस्तो हीनताबोध हुदो रहेछ भन्ने कमरेड प्रचण्डले विगत दुई बर्षमा पक्कै राम्रैसँग अनुभव गर्नुभयो होला ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यो उचाईमा पुर्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने पाका नेताहरु मोहन बैध्य क. किरण र गौरव, जनयुद्धमा आफू बराबरकै देन भएका कमरेडहरु डा. बाबुराम भट्टराई र बादल, राजनीति र समाजलाई नै दिशानिर्देश गर्नसक्ने क्षमतावान युवाहरू गोपाल किराँती, आहुती, विप्लवहरु आफ्नैं प्रिय कमाण्डरको साथमा सँगसँगै अगाडि बद्न नसकेर किन छुट्टाछुट्टै बाटो हिड्ने कठोर निर्णय गर्न बाध्य भए ?
जनयुद्धको आदर्श नत्याग्ने अडान राख्ने लक्ष्मण थारूहरु पार्टीबाट किन छुट्टयाइए ?
देशलाई निस्वार्थ योगदान गर्नसक्ने देशभक्त युवाहरूलाई किन भारत, मलेसिया, खाडी मुलुकहरुमा जबर्जस्ती मजदुरी गर्न जान बाध्य पारियो ?
गाउँमा सहिद र बेपत्ता परिवारहरु, घाइते र द्वन्द्व पीडितहरु किन अझैसम्म दयनीय अवस्थामा छन् ? राज्य वा बिद्रोहीको मान्छे भनेर विभेद गर्नुभन्दा आफ्नै नागरिक सम्झेर, मानवीय भावना राखेर अहिलेसम्म समाजमा किन सम्मानित समायोजन, उचित सम्बोधन र व्यबहार हुन सकेन ?
मान्छेको जीवनमा नैतिकतालाई प्राण मान्नुपर्दछ भने अनैतिकतालाई महाअपराध । कसैको खुनपसिना, त्याग र अशल भावनाले प्राप्त सामुहिक सफलतालाई नितान्त निजी खुशी ठान्नु अनैतिक हुनु मात्रै नभएर मानव आचरणबाटै बिचलित हुनु हो ।
आफ्नो राजनैतिक जीवन र हालको परिस्थितिका सम्बन्धमा कमरेड प्रचण्डले पनि पक्कै गम्भीर समिक्षा गर्नुभएकै होला ।
कुनै पनि पार्टी र संगठनमा विधि र प्रक्रिया सबैका लागि र सधैंका लागि समान दंगले लागू गरिनुपर्दछ । आफुले मनपरि गर्दा चाहिँ ठिक, अरुले गर्दा मात्रै वेठिक भन्ने हुनुहुदैन । सम्पूर्ण बामपंथीहरु एकजुट हुने राम्रो उद्देश्य बाहेक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा भएको एकताको सैद्धान्तिक बैचारिक आधारहरु केके थिए भन्ने प्रश्नको खोजी र अनुसन्धान भविष्यमा अवश्य हुँदै जानेछ । नेकपा अहिले अन्योलमा रहेर कमिटी प्रणालीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहनुभन्दा विगतका कमजोरीहरुप्रति सबैले आत्मालोचना गर्दै सच्चिएर विधि र पद्धतिलाई आफैंमाथि पनि लागू गर्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । हामीले लडेर लोकतन्त्र ल्यायौ भनेर गर्वले छाती पिट्ने नेताहरुले नै यस्तो घृणित सामन्ती चरित्र प्रदर्शन गर्नुले लोकतन्त्रकै उपहास भइरहेको छ । अब नेकपा सच्चिने या सक्किने, झुक्ने वा उठ्ने कुन दिशामा जाने हो भन्ने धेरै हदसम्म प्रचण्डले गर्ने निर्णयमै निर्भर रहनेछ । यो मतभेद पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिला हो तर देशकै प्रधानमन्त्री मुछिएका कारण संकटको समयमा सम्पूर्ण जनताले दु:ख भोग्नु परिरहेको छ । नेकपाले कि प्रधानमन्त्रीलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्न सहयोग र निर्देशन गरोस् कि त ब्यक्ति फेरोस् तर जे गर्ने हो तुरुन्तै गरोस् । आशा गरौं, साझा र सहि निर्णय हवस् ।
केवल सत्ता र शक्तिको लागि पार्टी र नेताहरु नजुटुन्, नफुटुन् । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारीपूर्वक सोचुन् र निर्णय गरुन् । यहीँ नै सबैको हितमा हुनेछ ।
विविध अरुका छोराछोरीले आत्मसमर्पण गरे कायर हुने बरु मृत्युु रोज्न आदेस दिने तर आफैंले चाहिँ पटकपटक लतृदै आत्मसमर्पण गर्ने ?
जनयुद्ध हाँक्ने सुप्रिमो कमाण्डर यिनै कमरेड थिए वा अरु नै कोही ?
यस्तो चरित्रलाई गतिशीलता मान्ने वा अस्थिर मानसिकता ?
यसरी लोकतन्त्र र समाजवादको आवरणमा रजाइँ गर्ने धुर्तहरुका विरुद्ध छिट्टै आन्दोलनको आँधी मात्रै होईन, व्यवस्थामै भुकम्प आउने निश्चित छ ।
Posted by Chandra Magar at 8:14:00 PM
सोती घटना र हाम्रो मानसिकता
माननीय प्रभाकरलाई पत्र
बाबुराम र वरियता
नेकपाको आन्तरिक कलह र वर्तमान सरकारको औचित्य